Phakathi kwemikhakha engaphansi komthetho womphakathi, indawo ekhethekile inomthetho wokukhokha. Lesi simo siqinisekiswa ukuthi yizibopho ezihambisana nokubuyiswa komphakathi.
Umqondo womthetho wemfanelo
Ukuze kuvezwe umqondo walesi sigaba esincane somthetho womphakathi, kubalulekile ukuchaza ngokuqondile igama elithi "ukuzibophezela". Ngakho-ke, kusukela esikhathini sezesayensi zakudala zaseRoma, kwaqondwa ngokuthi ubuhlobo, ngenxa yokuthi lowo obolekayo ubophezelekile ukwenza izenzo ezithile ngokuqondene nomkweleta noma ukugwema izenzo ezinjalo. Kulokhu kulandela ukuthi:
- isibopho ngaso sonke isikhathi ubuhlobo phakathi kwabantu okungenani ababili;
- isihloko sobudlelwane kufanele ngaso sonke isikhathi sihlulwe ngokuqondile;
- umboleki unesibopho sokuthi azenze noma angenzi ngokuvumelana nomkweletu.
Lezi zici ezintathu zibalulekile ekunqumeni ukuthi yini umthetho wokubophezela, okungukuthi: iqoqo lemithetho elawula ubudlelwane mayelana nokusebenza komuntu oyedwa kwezibopho ezithile eziqondene nomunye umuntu.
Imikhakha engaphansi kokucatshangelwa inezici ezikhethekile ezihlukanisa nabanye abaningi. Ngakho, umthetho wokubophezela:
- njalo uxoxisana nokuguqulwa kwezinto ngaphakathi kwenzuzo yomphakathi;
- imelela inqubo yokudluliswa kwamalungelo okubambisana phakathi kwamabhizinisi;
- elawula ukuhamba kwezimpahla kuphela, kodwa nokuhlinzekwa kwezinsizakalo, kanye nokusebenza komsebenzi;
- isebenzisa izindlela kuphela zomthethonqubo olahlayo;
- isekelwe kuphela emthethweni, kodwa futhi nasemigomeni evamile.
Konke lokhu kusivumela ukuba sithole umqondo ohlukile womthetho wokubophezela, okungukuthi: kuyisethi yomthetho wangasese, imigomo elahlayo ehlose ukulawula inzuzo yomnotho.
Ukuze uqiniseke ngokufaneleka kwalokhu kuncazelo, umuntu kufanele abheke kuphela uhlelo lwaleli gatsha lomthetho.
Uhlelo lomthetho wezibopho
Izindleko ezinkulu zezenzo zomthetho zizinikezele ekuzibophezelweni emazweni amaningi asekuhlaleni. Ngakho-ke, futhi emthethweni waseRussia ikhodi yomphakathi inikeza ukunakekelwa okukhulu kulowo mbhalo, njengomthetho wemfanelo.
Iqoqo lezinkambiso zalo lihlukaniswe ngezigaba ezimbili - jikelele futhi elikhethekile, elihlukanisa lolu hlobo lomthetho kusuka kwabanye, olubandakanya kwisakhiwo salo kanye nengxenye ekhethekile.
Uhlelo lomthetho wezinyathelo lusekelwe engxenyeni eyinhloko. Lesi sigaba siwela ngaphansi kwemithetho elawula amaphuzu amakhulu ahlobene nezibopho, okungukuthi:
- incazelo yomthetho kanye namacala okwenzeka kwesibopho;
- imithetho yokubukeka, ukuguqulwa nokuqedwa kwalokhu;
- izinhlinzeko ezijwayelekile ezifundweni nezihloko zezibopho;
- izindlela zokugcwalisa izibopho ;
- izinhlinzeko ezijwayelekile ezinkontileka.
Zonke izindinganiso ezinhlanu ezingenhla ziphoqelekile ukudalulwa, ngoba Izincazelo ezifakiwe kuzo zihlanganisa umthethonqubo oqondile, ongena-gap wezikhungo ezakha ingxenye ekhethekile.
Futhi ekugcineni kuyadingeka ukuthwala:
- Izibopho ezivela ngesisekelo sezinkontileka;
- izibopho ezingekho izivumelwano.
Iqembu lokuqala libizwa ngokujwayelekile kuzo zonke izinkontileka ezihlobene nokuhamba kwezinto zokusetshenziswa okwesikhashana noma okuphakade, nezinkontileka ezihlose ukuhlinzeka ngamasevisi noma ukwenza umsebenzi. Kufanelekile ukuphawula lapha isigaba sezibopho ezivela enkambeni yokusebenzisa amalungelo omhlaba wengqondo.
Iqembu lesibili lonke liyingxenye ekhuthazayo yezibophezelo nezibopho ezivela ekucebiseni okungenangqondo.
Uhlelo olunikezwe ngenhla lunikeza umqondo ocacile wokuthi umthetho wezibopho ungenye yezingxenye ezibaluleke kakhulu zomthetho womphakathi osebenza ngenzuzo yombuso futhi uyisizo esinamandla esingokomthetho sokuthuthukisa umnotho.
Baskunchak (echibini): kanjani lapho? Lokho aphathe amanzi okuphulukisa echibini?